WARBIXIN Xiiso Leh: 20 Xaqiiqo Oo Aadan Ogayn Una Baahantahay In Aad Ka Ogaato Abaalmarinta Ballon d’Or-ka Ka Hor Inta Aan Lagu Dhawaaqin Khamiista – Kooxda.com
Home 2017 December France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN Xiiso Leh: 20 Xaqiiqo Oo Aadan Ogayn Una Baahantahay In Aad Ka Ogaato Abaalmarinta Ballon d’Or-ka Ka Hor Inta Aan Lagu Dhawaaqin Khamiista
WARBIXIN Xiiso Leh: 20 Xaqiiqo Oo Aadan Ogayn Una Baahantahay In Aad Ka Ogaato Abaalmarinta Ballon d’Or-ka Ka Hor Inta Aan Lagu Dhawaaqin Khamiista
December 7, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Xaflada Abaalmarinta Ballon d’Or-ka ayaa la qaban doonaa maalinta khamiista iyada oo lagu qaban doono meesha ugu quruxda Badan dalka France.
Sida la iska wada og yahay xiddiga Lionel Messi ayaa ah xiddiga ugu guulaysiga badan abaalmarintan xilli uu Cristiano Ronaldo ku xigo.
Labada xiddig ayaa abaalmarintan ku tartamaya mar kale sanadka xilli ay jiraan warar sheegaya in Ronaldo ku guulaystay markiisii 5-aad tartanka.
Hadaba waxa aanu warbixintan ku soo gudbin doonaa 20 xaqiiqo oo ay tahay in aad ka ogaato abaalmarintan ka hor khamiista:
** Xiddigaha u dhashay dalka England ayaa 49 jeer loo magacabaabay xiddigaha u tartamaya abaalmarinta xilli David Beckham yahay xiddiga ugu magacaabista badan isaga oo 10 jeer loo magacaabay waxa ku xiga Bobby Charlton, Wayne Rooney (9) jeer loo magacabaabay, Bobby Moore (7), Steven Gerrard, Michael Owen Iyo Jimmy Greaves (6).
** Lionel Messi ayaa ah xiddiga ugu badan ee abaalmarintan ku guulaystay (5) isaga oo ka horeeya xiddigaha Cristiano Ronaldo (4), Michel Platini, Johan Cruyff Iyo Marco van Basten (3).
** France Football oo ah majalada abaalmarintan bixisa ayaa dib u qiimaysay ku guulaystayaashii abaalmarintan ka 1995 wakhtigaas oo ay kaliya xiddigaha Yurub ku guulaysan kareen abaalmarinta sida laga soo xigtay qiimaynta xiddigii hore ee Brazil ee Pele ayaa haatan 7 jeer ku guulan lahaa Abaalmarinta halka xiddigaha Garrincha, Mario Kempes,Diego Maradona (2) jeer iyo Romario oo hal mar ku guulaysan lahaa.
** kaliya laba jeer ayaya 3-da xiddig ee abaalmarintan ku tartamaya wada noqdeen xiddigo hal wadan ka soo jeeda waxa ay ahayd 1981 Germany ayay 3-da xiddig ee u tartamayay ka soo jeedeen waxana ay ahaayeen xiddigaha (Rummenigge, Breitner, Schuster) halka 7 sano kadib sanadkii 1988 xulka Holland 3-da xiddigba ka soo jeedeen kuwaas oo kala ahaa (Van Basten, Gullit, Rijkaard).
** kaliya 3 jeer ayaya 3-da xiddig ee abaalmarintan ku tartamaya wada noqdeen xiddigo ka soo jeeda hal koox waxa ahay ahayd sandkii 1988 (Van Basten, Gullit, Rijkaard) Iyo 1989 (Van Basten, Baresi, Rijkaard) halka ay sanadkii 2010 ay kooxda Barcelona uga tartamayeen 3-da xiddigba (Messi, Xavi, Iniesta).
** Xulalka Holland iyo Germany ayaa ah xulalka ugu badan ee xiddigaha ka soo jeeda ay abaalmarintan ku guulaysteen 7 jeer ayay ku guulaysteen, xulalka Frnace iyo Portugal ayaa ku xiga min 6 jeer iyo xulalka Italy, Brazil, England Iyo Argentina (5).
** Xulka qaranka Liberia ayaa ku guulaystay abaalmarin ka badan kuwa ay ku guulaysteen isku darka xulalka Northern Ireland Iyo Scotland hal mar ayay ku guulaysteen.
** Kooxda Barcelona ayaa ah kooxda ugu badan ee ay xiddigeheedu ku guulaysteen Abaalmarinta 11 jeer ayay ku guulaysteen waxa ku soo xiga kooxaha Real Madrid (9),Juventus Iyo AC Milan (8).
** Kooxaha Blackpool Iyo Dukla Prague ayay xiddigaha u soo ciyaaray ku guulaysteen abaalmarintan in ka badan kooxda Liverpool oo hal mar ku guulaystay iyo Arsenal oo ayna cidna ugu guulaysan.
** George Weah ayaa ah xiddigii aan yurub u dhalan ee ugu horeeyay ee ku guulaystay abaalmarintan waana xiddiga kaliya ee ilaa haatan abaalmarintan ku guulaystay africa.
** Xiddiga Paul Scholes ayaa xiddiga ugu badan badan ee loo magacaabay xiddigaha u tartamaya ee aan wax cod ah helin.
** Ka Hor magacaabistii Harry Kane ee sanadka 2017, Jamie Vardy ayaa ah xiddiga kaliya ee loo magacaabay xiddigaha u tartamaya tan iyo sanadkii 2012.
** Lev Yashin ayaa ah goolhayaha kaliya ee abid ku guulaysta abaalmarintan.
** Fabio Cannavaro ayaa ah daafaca kaliya ee ku guulaysta abaalmarinta tan iyo 1996.
** Jimmy Greaves ayaa ah xiddiga kaliya ee loo magacabaabay tartanka abaalmarinta sanad kaliya 1961 wakhtigaas oo uu u ciyaaray 3 kooxood oo kala duwan (Chelsea, Milan Iyo Tottenham).
** John Jensen Ayaa ah xiddiga kaliya ee goolasha ugu badan dhaliyay horyaalka isaga oo u ciyaaraya Arsenal waxana kaliya tartamayaasha abaalmarinta loo magacaabay hal mar.
** Jamie Carragher ayaa helay codad Abaalmarinta ah oo ka badan Cristiano Ronaldo sanadkii 2005 waxana ay labadooduba ku dhamaysteen kaalinta 20-aad.
** Karim Benzema ayaa ah tartamaha kaliya ee abaalmarintan kaas oo aan wax cod ah helin sanadkii 2009.
** Asamoah Gyan oo u ciyaara Sunderland ayaa ah xiddigii 2-aad ee meesha ugu saraysa ka galay codaynta abaalmarinta sanadkii 2010.
** Xiddigaha Ivor Allchurch sanadkii 1965, Ken Jones sanadkii 1959 Iyo Don Givens sanadkii 1975 ayaa ah xiddigo min hal mar loo magacaabay tartamayaasha abaalmarintan.